Semalt Expert: Cloaking, famoronana tenimiafina, fifanakalozana fifanakalozan-kevitra ary ny Black Hatah SEO Techniques
Miaraka amin'ny fiovan'izao tontolo izao, ny olona dia mitady vahaolana amin'ny olana atrehany an-tserasera. Google dia manatsara ny algorithm isan'andro. Maro amin'ireo mpivarotra no miankina amin'ny SEO mba hanatsara ny laharana. Misy teknika tsy ara-dalàna, tsy ara-teknika ampiasain'ireo manam-pahaizana SEO. Amin'ny alàlan'ny fampiasana azy ireo anefa, mety hampidi-doza ny sehatra misy anao ao amin'ny lisitra Google misy anao.
Basic practices SEO dia misy ALT tags, tags labels meta famaritana sy ny XML sitemap ho mpitarika motera fikarohana robots rehefa mijery amin'ny votoatiny. Manolo-kevitra ihany koa ny mampiasa marika an-tsoratra tokana ho an'ny pejy tsirairay. Rehefa miditra lalina ao anaty lavaka bitika SEO ianao, dia hahita fomba fanao mety hanimba ny SEO anao, nefa tsy voatery mitondra ny fifamoivoizana noeritreretinao. Ireo fanao ireo dia fantatra amin'ny hoe "Techniques Blackhat." Google dia manana algorithms ho an'ny Panda sy Penguin izay afaka mamafa azy ireo mihitsy aza. Igor Gamanenko, Semalt Mpitantana Success Successor, nanasongadina azy ireo etsy ambany.
Cloaking dia fomba iray ampiasaina amin'ny kapa mainty hoditra SEO, izay tafiditra amin'ny famoahana an'i Google amin'ny alàlan'ny fanehoana azy amin'ny votoaty samihafa sy ny fampiasana ny mpiserasera amin'ny pejy web hafa fa tsy ilay iray izay hotsidihany. Ary izany dia ny teknolojia SEO amin'ny ankapobeny. Ohatra, mamorona fehezan-dalàna ianao izay mahatonga an'i Google hieritreritra fa manodina ny fifamoivoizana amin'ny tranonkala iray misy fanavaozam-baovao ianao raha toa ianao ka mitondra azy ireo any amin'ny fivarotana e-commerce. Google dia nampiasa ny algorithm hamantarana ireny tsy fahampiana ireny. Raha voasambotra ianao dia mety ho voarara amin'ny Google na hizara amin'ny pejy farany
Ny fifanakalozan-kevitry fifanakalozan-kevitra dia fototry ny SEO hafa raha toa ka mifanakalo rohy ny webmasters. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, dia ambany sy tsy misy ifandraisany amin'ny rohy votoaty ireo. Na dia efa niasa tamin'ny lasa aza izy dia tsy mahomby intsony. Fomba haingana ahazoana fifandraisana amin'ny fotoana fohy, fa tsy hanatsara ny laharam-pahamehana izany.
Tsy miasa intsony ny fandefasana votoaty avy amin'ny tranonkala hafa. Google dia manindry ny votoaty miavaka sy vaovao. Ny votoaty rehetra handikanao dia handao..Noho izany dia tsara kokoa ny mandany fotoana hamoronana votoaty tsy manam-paharoa. Raha te hahafantatra ianao raha manana duplicate ny votoatin'ny bilaogy WordPress anao dia mandehana ao amin'ny www.shoutmeloud.com.
Fotoana vitsy taorian'izay, ny vohikala dia nanolotra soso-kevitra an'arivony ho an'ny dolara vitsivitsy. Izany dia niasa tsara tamin'ny filazàna fa voalaza fa ny rohy dia mamaritra 80% amin'ny toerana misy anao. Rehefa nanavao ny algorithma Google i Google dia nahita ireo tranonkala spammy mivarotra rohy rehetra ary nanasazy azy ireo. Izy ireo aza dia nanasazy ireo nividy ireo rohy ireo.
Ny fanodinkodinan'ny teny fanalahidy dia miseho rehefa mampiasa ny teny fototra ianao rehefa avy ny fehezanteny iray hafa. Tsy ratsy ny manam-pahefana amin'ny zavatra, fa mamerimberina ny teny fototra ary manjary maso ny mpamakinao ary manimba ny ezaka SEO anao.
Midika izany fa ao anatin 'ny faran' ny tononao amin 'ny loko mitovy amin' ny tantaranao ny teny fanalahidy. Tahaka ny fotsy fotsy amin'ny pejy fotsy. Mety hamitaka olona ianao, saingy tsy afaka mamely ny robots Google ianao. Izy ireo dia mamaky ny fijerena ny loharanom-baovao ho an'ny soratra miafina. Mety hanasazy anao izy ireo noho ny fiezahany handainga amin'izy ireo.
Efa nitsidika tranonkala iray feno rohy ve ianao? Ampifandraisina amin'ny toeram-pambolena ny vohikala natokana ho an'ny fifanakalozana rohy. Google dia manohitra ity hevitra ity. Manaiky ianao fa ny mijanona lavitra azy ireo dia azo antoka kokoa noho ny famonoana azy. Tsy ianao ve?
Ity dia maka votoaty avy amin'ny tranonkala iray hafa ary mampiasa rindrambaiko hanamboarana ilay lahatsoratra. Ny fampiasana rindrambaiko famoronana rindrambaiko maimaim-poana dia eo ambany fitenenana koa Na dia mety ho hadalana aza ny milina fikarohana dia tsy hahazo fahafinaretana ny votoatin'ny spammy ny mpihaino anao.
Noho ny fanatsarana
Milaza zavatra be dia be ny poizina. Fantatrao ve fa manatsara ny votoatin'ny SEO manohitra anao?
Ny kalitao ambany sy tsy misy dikany
Na dia tsy mandiso fanondroana amin'ny votoatin'ny lahatsary sy ny kalitao aza ianao, dia ho very ny mpitsidika. Ny votoaty toy izany dia handefa azy ireo, ary hitan'i Google izany.
Maro ireo "manam-pahaizana" ao amin'ny aterineto no manoro hevitra amin'ny teknolojia SEO. Mitandrema amin'izay teknika ampiasainao. Ho fitsipika ankapobeny, tsy afaka mandeha amin'ny ratsy amin'ny fitaovana webmaster Google ianao Source .